Sida loo dayactir vlc dhibaato u hagaagsan audio
Marar badan, waa in aad soo martay dhibaato syncing aad maqal ah iyada oo la raacayo video halka ciyaaro kasta video on VLC Player . Mararka qaar, waa kaliya dhib yar, taas oo uu hagaajin ku gaar ah ka dib markii qaar ka mid ah daqiiqado. Mararka qaarkood, dhibaato waa mid laga samri lahayn, in dhibaato waxaa inta badan lama ogaado. Laakiin markii dhibaato uu helo ugu waaweyn iyo daawashada video ah suurtogal ma aha, baahida loo qabo waa in ay saxaan marayo hab qaar ka mid ah. Halkan waa xalka.
Qaybta 1aad: Sida loo dayactir hagaagsan audio vlc on Windows?
Qeybta 2: Sida loo dayactir hagaagsan audio vlc on MAC?
Iyadoo VLC Player waxaa socda on Windows iyo mid ku dhacdaa dhibaato ah de-u hagaagsan of audio la videos ah, dhibaato la baajin karin inay qaadato qiyaas sax ah.
Tag menu VLC ah, oo guji aad rabtid. Riix menu Audio ah. Riix oo dhan ee geeska hoose ee bidixda in ay muujiyaan door bidaan in ka badan audio. Raadi 'Audio magdhow de-.Wadashaqayntaas' in doorashaada leh. Haddaba waxaa waqti aad u dhigay magdhow syncing ah ama togan ama taban, kaas oo gebi ahaanba ku xiran tahay sida aad audio waa out of hagaagsan oo video ah, aad tahay ciyaaro. In xaaladda, aad audio waa ka hor video ah, oo kaliya codsan xun ku salaysan waqtiga saxda ah, halka ay dhacdo, waa video ka dambeeya, ka dibna horay audio adigoo codsanaya wanaagsan. Markaas guji mooyee, iyo ciyaaro aad video. Waxaad hubin in aad hesho natiijada ugu fiican iyo video la gebi synced doonaa audio ah.
Eeg si dhekhso ah oo ku saabsan sida ay u la arrinta ka qabtaan.
Wixii qamaar arrinta ku saabsan MAC, xalka waa iska sahlan. Waxaan u isticmaali kartaa furaha toobiye on MAC ah ee isku mid ah iyo saari karaan dhibaatooyinkoodii oo dhan ee la xiriira syncing ah Audio la Video. Isticmaalka qaar ka mid ah furayaasha anfacaya oo ah qaab F muhiimka ah iyo G Key yihiin qaar ka mid ah furayaasha si ay ula qabsadaan ku audio iyadoo la raacayo video ah.
Marka aad riixdid F Key, Decrease ah Audio Dib u Dhaca rabtay heli doonaa shuqulkaaga, halka G Key wuxuu kordhin doonaa wax Audio Dib u Dhaca rabtay. Sidaas, waxayna ku xiran tahay dib u dhac ama ka hor audio la video ah, waxaad u baahan tahay oo dhan waa in ay wax miiran furayaasha iyo aad shaqada si fudud u samayn. G Furayaasha guuro Audio weeraryahanka halka F muhiim ah Audio ka dib dhaqaaqi doono.
Eeg snapshots hoos ku qoran si aad u hesho fikrad, waxa ay furayaasha kuu sameyn karo.
Labadan furayaasha samayn karaa yaabab aad u. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa la qabsato oo aad video waafaqsan oo wuxuu ku raaxaysan video ah.
Fiiro gaar ah: Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in isbedelada oo aad doonaysid in aad halkan ku soo noqon doonaa oo kaliya ku meel gaar ah iyo sida ugu dhakhsaha badan aad xirmin video iyo Banaadir, dhammaan isbeddellada ku sameeyey noqon doonaa dib oo aad u baahan tahay in ay mar kale soo isbedel u isla video. Sidaas darteed, si ay u sameeyaan isbeddel joogto ah, kaliya keeno on video ugu fiican la lahayn khaladaadka noocaas ah iyada oo maqal ah ka.
> Resource > VLC > Sida loo dayactir dhibaato u hagaagsan audio vlc?